2. ရေတိုင်ကီအား ပြင်းထန်သောအပူစီးကူးမှုနှင့် ကောင်းသောအပူကို ပျံ့နှံ့စေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ဆန့်နိုင်အားရှိသောလူမီနီယံသတ္တုစပ်ပစ္စည်းမှ ဆန့်ထုတ်ထားသည်။
3. နေရာအမျိုးမျိုး၏အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သောကွင်းစကွင်းပိတ် သို့မဟုတ် လမ်းမီးအိမ်ချိတ်ဆက်မှုစွပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
4. လမ်းမီးအိမ် ဒီဇိုင်းကို မြို့၏ လမ်းမကြီး၏ လမ်းသွယ် နှစ်သွယ်အတိုင်း ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ကြီးမားသော အလင်းရောင် ဧရိယာနှင့် တစ်ပြေးညီ အလင်းရောင်များ ပါ၀င်သည်။
5. ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အိုးထမင်းဘူး ပေါင်းစပ်ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှု၊
7. Tempered glass ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံး၊ atomized anti-glare ဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားသော စွမ်းအင်သက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူပေါင်းစပ်မှုကို တွန်းလှန်နိုင်ပြီး အလင်းပို့လွှတ်မှု 90% အထိ၊
8. အဆင့်မြင့် drive ပါဝါနည်းပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားထည့်သွင်းမှု၊ အဆက်မပြတ်လက်ရှိ၊ အဖွင့်ပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊ တိုတောင်းသောပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊
9. နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် LED မော်ဂျူးများစွာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် optical ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အလယ်တန်းအလင်းဖြန့်ချီရေးစနစ်၊ ယူနီဖောင်းနှင့် အလင်းပျော့၊ အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ≥120lm/w၊ မြင့်မားသောအရောင်ဖော်ခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း၊ အစိမ်းရောင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊
11. လိုအပ်သလို အလင်းဝင်သည့်ထောင့်ကို ချိန်ညှိပေးသော သီးသန့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကွင်းပိတ်ချိန်ညှိမှု ယန္တရား။
1. မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်တွင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ၊ မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ပြီးနောက် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အမှတ်အသားကို ပေါင်းထည့်ပါ။သီးခြားလက္ခဏာမှာ- "ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် - သတ်မှတ်ချက်ကုဒ် + ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံခြင်းအမှတ်အသား + မှာယူမှုအရေအတွက်"။ဥပမာအားဖြင့်၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော LED အလင်းတန်း 100W၊ ကွင်းဆက်တပ်ဆင်ထားပြီး အစုံ 20 လိုအပ်ပါသည်။မော်ဒယ်နံပါတ်မှာ- “မော်ဒယ်- FCT93-သတ်မှတ်ချက်- 100BFB+Exdmb IIC T6 Gb+20။”
2. ရွေးချယ်ထားသော တပ်ဆင်မှုပုံစံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် P431~P440 ကို ကြည့်ပါ။
ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မီးလုံးများနှင့် မီးအိမ်များ
BAD63-A စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်...
မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. အလူမီနီယမ် အလွိုင်းပုံသွန်းခွံ၊ မျက်နှာပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်းမှု၊ လှပသော အသွင်အပြင်။2. အပေါက်တစ်ခုစီမှ ကင်းလွတ်သော အလင်းရင်းမြစ် ကာဗို၊ အလင်းရင်းမြစ် အပေါက်နှင့် ဝါယာကြိုး ၃ ခု၏ မူပိုင်ခွင့် ဒီဇိုင်း။3. borosilicate ဖန် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံး သို့မဟုတ် ပိုလီကာဗွန်နိတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံးကို အသုံးပြုခြင်း၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော အဖုံးကို အသုံးပြုခြင်း။4. သံမဏိနှင့် ထိတွေ့ထားသော တွယ်ကပ်များ ၏ မြင့်မားသော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။5. ပွင့်လင်းသောအဖုံး...
မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. ဘေးကင်းရေး ပေါက်ကွဲခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း- ပေါက်ကွဲနိုင်သော အကာအကွယ် မီးချောင်းများ ၊ မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်သော နေရာ အမျိုးမျိုးအတွက် လုံခြုံစွာ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။2. ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော- Solid-state light-free maintenance-free LED light source၊ မြင့်မားသော တောက်ပသောထိရောက်မှု၊ သက်တမ်း 100,000 နာရီအထိ။ဘက်ထရီသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းပြီး စွမ်းအင်မြင့် ပိုလီမာလီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ဘေးကင်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊3. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် အဆင်ပြေသည်- လူ့ခေါင်းပတ်ဒီဇိုင်း၊ ခေါင်းစည်း ပျော့ပျောင်းသော၊
Model Implication Features 1. အရံအကာကို အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။၎င်းအား ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော မြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှုရှိသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏အပြင်ပိုင်းသည် ပြင်းထန်သော corrocion proof နှင့် လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသော အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် အပစ်ခံရပြီးနောက် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားတည်ငြိမ်စွာဖြင့် ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖျန်းထားသည်။2. ခိုင်ခံ့သောမှန်အဖုံးသည် ထုတ်လွှင့်မှုကောင်းသည်။အပြင်ဘက်တွယ်ကပ်များကို Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။3. မီးမောင်းထိုးပြရာတွင် အီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းညှိကိရိယာ ရှိသည်..။
မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. အလူမီနီယံ အလွိုင်းပုံသွန်းခွံ၊ မျက်နှာပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်းဆေး၊ လှပသော အသွင်အပြင် 2. တစ်ခုတည်းသော LED ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော မော်ဂျူလာ ဒီဇိုင်းထူးခြားသော၊ အထူးမီးခွက်ကွင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော လက်စွပ်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်၍ သွန်းလုပ်နိုင်သည် မီးချောင်းများ၊ မီးချောင်းများ သို့မဟုတ် မီးအိမ်များသည် နေရာအမျိုးမျိုး၏ အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်၊ ပိုမိုအဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတို့ဖြစ်သည်။3. မြို့ပြပုံစံနှင့်အညီ လမ်းမီးများ...
Model Implication Features ၁။အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မာကျောမှုမြင့်မားသည်။သဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်သည် လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။၂။အထူးမီးအိမ်၊ တာရှည်ခံ၊ စားသုံးမှုနည်းသော၊ စွမ်းအင်ချွေတာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ အလင်းရောင်စုစည်းမှုသည် ပျော့ပျောင်းသည် (အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံ၊ အမှတ်အသားများ၊ လက်ဗွေရာများ၊ ဓာတ်ပုံများစသည်တို့)၊ တောက်ပသော အလင်းရောင်၊ 1200 lumen၊ ပျံသန်းမှုအကွာအဝေး 600m၊ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ချိန် 8 နာရီ၊ luminous flux 600 lumen အလုပ်လုပ်ပါက၊ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပါ...